Ireo morontsiraka tsara indrindra any Oman | Vaovao momba ny dia
Ny morontsiraka tsara indrindra any Oman
Oman dia firenena manana fifangaroana tanteraka amin'ny fomba amam-panao ara-kolontsaina sy ny endrika mahafinaritra. Tanànan'ny lalana rarivato sy moske mahavariana no mitambatra miaraka amoron-dranomasina maherin'ny 1.700 kilometatra eo am-pototry ny Golfa Oman ary ny Ranomasina Arabia. Ahoana no tsy ahitanao moron-dranomasina mahafinaritra eto miaraka amin'ny rano madio mangarahara, toerana tsy hay hadinoina amin'ny fialan-tsasatra nofinofy?
Ny voalohany izay atolotray dia Khalouf Beach, any atsimon'ny Muscat, renivohitr'i Oman. Ny dongom-peony goavambe sy ny maha somary manalavitra ny fahabetsahan'ny mpizahatany no mahatonga azy hijanona ho paradisa hafahafa. Toerana manokana izay mbola hita ny mpanjono manjono amin'ny sambony sy ny haratony amoron-dranomasina.
25 kilometatra miala an'i Muscat no ahitantsika Bandar jissah, ny fanafody tonga lafatra handosirana ny tsena sy ny mpizahatany eto an-drenivohitra. Ny tsy fitoviana eo amin'ny manga milamina amin'ny ranomasina sy ny ala dia izay manodidina antsika dia mahavariana. Toerana iray tena nentim-paharazana, miaraka amin'ny sambon'ireo mpanjono madinidinika eny amoron-dranomasina, fa mety amin'ny fisitrihana scuba.
Amin'ny morontsiraka atsimon'i Oman, akaikin'ny tanànan'i Salalah, dia Mughsayl Beach. Ity morontsiraka ity dia manana hatsarana tsy manam-paharoa, satria mametraka antsika amin'ny endriny amin'ny sehatra tsara indrindra any Karaiba. Hazo palmie sy voanio, toeram-pambolena akondro ary onja goavam-be mamely ny hantsam-bato. Enclave tsy dia mahazatra loatra eto Oman fa iray izay manentana ny gaga ny mpizahatany manaja tena.
Tiwi beach Io no iray amin'ireo morontsiraka malaza indrindra any Oman, indrindra ho an'ny manga kristaly ao amin'ny ranony sy ho toerana tsara indrindra hisitrihana ao amin'ny firenena Arabo. Amin'ny tendrony dia mamporisika anao aho handeha amin'ny hantsana izay amoron'ny morontsiraka. Amin'ny takariva, dia aseho antsika ny fizahana sary miavaka.
Farany dia ilaina ny manantitrantitra Ras al Hadd Beach sy ireo sokatra maintso. Any amin'ny tendrony atsinanan'i Oman no misy ity faritra ity no iray amin'ny tranainy indrindra amin'ny firenena hatramin'ny telo arivo taona talohan'ny Kristy. Jereo raha voaaro ny helodrano, izay natao fialofana ho an'ny sambo sy ny fiaramanidina nandritra ny Ady Lehibe Faharoa.
Sary - Travel Plus Style
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » tora-pasika » Ny morontsiraka tsara indrindra any Oman
Faritra mampidi-doza any Amerika
Woodside, anisan'ireo faritra mampidi-doza indrindra any Amerika